I-Extole: Ukukhuthaza uBrand kunye nokuThengisa ngokuDlulisa | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 22, 2019 NgoMvulo, Aprili 22, 2019 Douglas Karr
Njengoko abathengi besiba zizithulu ngakumbi kuthengiso oluphazamisayo, kubalulekile ukuba ii-brand zichonge abameli bazo kwaye zibanike izixhobo eziyimfuneko ukunceda ukuthumela iimveliso kunye neenkonzo zabo. I-Extole's Iqonga lokuthengisa elidlulisayo lenza iinkqubo zokukhuthaza ezilinganisa ezona mveliso zinkulu.
Yenza amava okwabelana ngamagqwetha. Inkqubo yokudlulisa eyenzelwe uphawu lwakho iya kuguqula abathengi bakho babe ngabameli kunye nokwandisa ulwazi malunga nophawu. I-Extole ibonelela ngesoftware yokuhambisa edlulisa ukuqhuba kunye nokwandisa utshintsho lwakho.
Ukwabelana okwakhiwe kwangaphambili kunye neetemplate zokudlulisa
Ukuhlelwa okubonakalayo komxholo wokudlulisela esiphelweni ukuya kumava on-brand
Uyilo oluhle lukhangeleka lukhulu kwiselfowuni, kwiwebhu, okanye kwiapp yakho
Iikhowudi zokwabelana ezenzelwe wena kunye nezibonelelo
Amava okuhambisa adlulisiweyo enza kube lula kubathengi ukuba babelane
Ulwimi lwasekhaya ukufikelela kwilizwe liphela
Abameli bakho kunye nabahlobo babo balindele umvuzo okhawulezileyo, kwaye ungenza ngokwezifiso ezi zinto zikhuthazayo ukufezekisa iphulo ngalinye lokuthengisa. Imivuzo yexesha lokwenyani yenza ukoneliseka kwangoko kwaye ikhuthaze ukwabelana nangakumbi kunye nokuhanjiswa. Sine-inshurensi eyakhelwe-ngaphakathi ngaphakathi, ke unokukhusela uphawu lwakho kunye nomda wakho.
Bamba iintlobo ezininzi zemivuzo, ngaphakathi nangaphandle
Umvuzo ngamatikiti, amanqaku okunyaniseka, amakhadi ezipho, nangaphezulu ngenjini yomvuzo ozenzekelayo
Yonwabela abathengi ngomvuzo ogqibeleleyo, ovavanyiweyo
Nika inkxaso kwimivuzo yamanye amazwe
Yenza imbuyekezo ngokhankaso ngalinye, ukuze ukwazi ukulandela ukuba yeyiphi inkuthazo esebenzayo
Misela imigaqo ephucukileyo yokufumana kunye nokuthintela ukuhanjiswa okumgangatho osezantsi.
Iiprofayili zoMmeli weBrand
Iqonga le-Extole lenza kube lula ukufumana kunye nokufikelela kwiimpembelelo ezinkulu. Abona bathengi bakho babalaseleyo - abo babelana nabo nabo baphendulayo- luluncedo lwakho olwahlukileyo. Sebenzisa iqela lokuqala kunye nedatha yenethiwekhi yoluntu malunga nabameli bakho ukunika amandla kwimizamo yakho yokuthengisa.
Isoftware yanamhlanje nekhuselekileyo yokuthumela kunye nezahlulo ezineenkcukacha kunye nokunika ingxelo ukuze baqonde ukuba ngoobani abameli bakho kwaye babelana njani
Iingxelo zexesha lokwenyani kwizabelo zakho eziphezulu, ezona mpembelelo zinkulu, kunye nabaqhubi bengeniso
Ukufunyanwa ngokulula, okuzenzekelayo kweempembelelo, abameli bebrand, kunye neenethiwekhi
Iiprofayili eziphuculweyo zabameli bakho abaphambili besebenzisa idatha kumaqonga amaninzi entlalontle
Mvuza abameli abalungileyo ngexesha langempela
Ngokujolisa kubaphulaphuli, i-Extole yenza ukuba kube lula ukufumana imbuyekezo, umxholo, kunye nemithetho yeshishini esekwe kumacandelo abaphulaphuli ahlukeneyo. Obu buchule buvumela amashishini ukuba alawule ngokulula iinkqubo ezininzi ngaxeshanye. Ukongeza, inkqubo nganye inokuba ne-mutliple variants ukuze uvavanye i-b / nayiphi na inkalo yenkqubo yakho yokuthumela.
Vavanya uyilo, isithembiso, kunye nemithetho yeshishini ukuze uqonde ukusebenza.
Yabela abaphulaphuli abohlukeneyo kwiinkqubo ezahlukeneyo ukuze babe namava alungiselelwe.
Lawula iinkqubo, amaphulo kunye novavanyo kwideshibhodi enye enika ukuqonda kwangoko kunye nolawulo.
Ubuchule boThengiso boPhuculo oluPhambili
I-Extole ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezinto ezinokukunceda wandise ukufikelela kunye nefuthe lokuthengisa kwakho.
Qalisa ukwanda kwemivuzo ukuze ukhuthaze ubhengezo ngakumbi kwaye ugcine inkqubo yakho intsha.
Vumela abathengi bakho babelane ngezinto ezithile ukuze bacebise kungekuphela uphawu lwakho kodwa nemveliso efanelekileyo.
Ukubandakanya abachaphazeli ngamaphulo akhethekileyo e-Extole awalandelayo kwaye awavuze.
Uyazi ukuba iinkqubo zokudlulisela-kumhlobo kufuneka zingabinangxabano. Ukwabelana nokuthumela kufuneka kube lula kangangoko kubathengi bakho. I-API yethu enamandla kunye neewebhooks zinika abathengi bakho amava angenamthungo kuyo yonke iapps kunye newebhusayithi, nokuba yeyiphi na into abayisebenzisayo.
Ukudluliselwa kwintengiso APIs yenzelwe injongo -software
Umdibaniso nomthengi wakho kunye namaqonga okwabelana noluntu
Isebenza ecaleni kwezisombululo zokulandela umkhondo
Cwangcisa ukunyusa okulula kunye nokwabelana kubathengi bakho ngee-APIs zethu
Yenza i-API epheleleyo, enobuchule bokwenza amava omsebenzisi
Lawula iinguqu ezinikwe amandla yi-API kunye nemivuzo
tags: uthethelelo lophawuUkongezwabhekisa-kumhloboiqonga lokuthengisa lokuthumelaiikhowudi zokwabelana